Fifa 14 for iOS ကို Non-Jailbreak device တွေမှာ full version ဖြစ်အောင် Hack ကြမယ်… | ပျဉ်းမနားသား
Home » iOS Games » Fifa 14 for iOS ကို Non-Jailbreak device တွေမှာ full version ဖြစ်အောင် Hack ကြမယ်…
Fifa 14 for iOS ကို Non-Jailbreak device တွေမှာ full version ဖြစ်အောင် Hack ကြမယ်…
Written By Htet Aung Moe on Friday, December 13, 2013 | 9:10 AM
လို့ရပါပြီ။ကျွန်တော်အရင်ကရှာပါသေးတယ်…မတွေ့လို့ပစ်ထားတာကြာပြီ။အခုမှပြန်ရှာကြည့်တော့တွေ့တာနဲ့ hack ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းတို့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာမှာ iTunes 11 နဲ့အထက် install လုပ်ထားရပါမယ်။နောက်လိုအပ်တာက မိမိ Apple ID နဲ့ Download ချထားတဲ့ Fifa 14 ipa ဖိုင်ပါ။ကဲ..စုံပြီးဆိုရင်စလိုက်ရအောင်ဗျာ…
1. windows7မှာဆိုရင် C:\_Users\_user\_Music\_iTunes\_iTunes Media\_Mobile Applications အောက်က Fifa 14.ipa ကို copy ကူးပြီး Desktop မှတင်ထားပါ။
2. Windows key+E နှိပ်ပြီး Organize>Folder & search options>view> မှ Hide extensions for know files type မှာအမှန်ခြစ်ဖြုတ်ထားပြီး Apply လုပ်ပါ။
3. စောစောက desktop ပေါ်တင်ထားတဲ့ fifa14.ipa ဖိုင်ကို fifa14.zip ဖိုင်အဖြစ် extension rename ချိန်းပေးပါ။
4. Download ဆွဲထားတဲ့ zip ဖိုင်ထဲမှ Fifa 14 iDevices.zip ကိုဖြည်ပြီးအထဲမှ ဖိုင်၂ခုကို Ctrl + C လုပ်ပါ။zip ဖိုင်အဖြစ်ချိန်းထားတဲ့Fifa14.zipဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး
Payload/FIFA14.app/Data/Gui/Data/XML/Screenlayouts/Main Menu သို့သွားပြီး Ctrl+V နှိပ်ပေးပါ။နဲနဲကြာတတ်ပါတယ်။စောင့်ပေးပါ။ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ zip ဖိုင်ကိုပိတ်လိုက်ပါ..ပြီးရင် Fifa14.ipa ဟု extension rename ပြန်ချိန်းပေးပါ။
5. Download ဆွဲထားသော zip ဖိုင်ထဲမှ iPhone Configuration Utility ကို install လုပ်ပြီး run ပေးပါ။ တစ်ကယ်လို့များ “Cannot located SQLITE3.dlll….” ဘာညာသာရကာ error တွေတက်လာရင် C > Program Files > Common Files > Apple > Apple Application Support > မှ SQLITE3.dll ဖိုင်ကို copy ကူးပြီး C:\_Program Files\_iPhone Configuration Utility ကိုသွားထည့်ပေးလိုက်ပါ။ iPhone Configuration Utility တက်လာပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လို့ရပါပြီ။
6. iCU မှ Application ကိုနှ်ိပ်ပြီး စောစောက extension rename ချိန်းပေးထားသော Fifa14.ipa ကို mouse ဖြင့် Drag ဆွဲပြီးထည့်ပေးပါ။အချိန်အနည်းငယ်ကြာပါလိမ့်မယ်..သည်းခံပြီးစောင့်ပေးပါ။Loading လုပ်နေချိန် iCU မှာ click မနှိပ်မိပါစေနဲ့။
တစ်ကယ်လို့ you already have another version of this game existed and it want to replace it လို့မေးလာခဲ့ရင် Yes နှိပ်ပေးပါ။ကျွန်တော့်တုန်းကတော့မမေးပါဘူး
7. iCU မှာ loading ရပ်သွားတာနဲ့ သင့် iphone/ipad ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ပါ။ iCU မှာ သင့် device ပေါ်မှာ click နှိပ်ပြီး Application ကိုထပ်နှိပ်ပါ။Fifa 14 ရဲ့ဘေးက install ဆိုတဲ့ button လေးကို click လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ခဏကြာပါဦးမယ်…စောင့်ပေးပါ။
အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ သင့် device မှာ Fifa14 icon ကိုမြင်နေရမှာပါ။Congratulation ပါ :D Fifa 14 full version ကိုအောင်မြင်စွာ unlocked လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။